Kiiska Tixraaca |
2020 Austria 1000L brewerery
GALLIEN, Waxay ku taallaa waddan qurux badan Austria. Ugu horeyn waxaan ku kulannay Carwada Nuremberg, Jarmalka 2018. Waxaana aad uga wada hadalnay wax soo saarka khamriga. Ugu dambayntii wuxuu ka sheekeeyay qorshihiisa iyo inuu maqaayaddiisa u dhiso warshad khamri. ...
Nidaamka isku -darka 500L ee Jarmalka
--- 500L microbrewery ee Jarmalka. 500l microbrewery of Firma Hausbrauerei Leidner waa la rakibay oo la bilaabay bilowgii 2017. Runtii waa waayo -aragnimo farxad leh in la wada shaqeeyo oo lala shaqeeyo milkiilaha Mr Roland. Waa nin aad u xirfad badan oo khibrad u leh cr ...
Jarmalka 1000L nidaamka Brewery
Waan ku faraxsanahay inaan kula wadaago war wanaagsan. Hadda waxaan suuq fiican ku leenahay Yurub, halkan waa 1000L brewery. Nidaamkan brewery unit waa 4 weel brewhouse oo leh 3pcs 1000L iyo 3pcs 2000L fermenter. Sidoo kale waxaan ka dhigay dahaarka double sida t ...
Faransiis 500L isku darka brewery
Kani waa macmiilkayaga Faransiiska, beer -khamriga waa Labo du Brasseur oo laga aasaasay Faransiiska. Beer -beertu waa nidaam isku -dhafan oo ah 500L oo leh kuleyl uumi iyo 4sets of fermenter biir ah iyo 2sets oo ah haanta biirka dhalaalaya. Macaamilka ...
Hal -abuurkaan 7BBL wuxuu u dhoofay Kanada wuxuuna sumcad sare ka helay macmiilkayaga. Sawiridda halsano Kahor dhalmada, macmiilku wuxuu diray qaybtii Saddexaad si uu u hubiyo ...
Canada 3.5BBL brewerery
Warcelinta macmiilka Kanada
Kani waa macmiilkeena weyn ee Bolivia, waxaan wada hadalnay marar badan iyo waqti dheer. Ugu dambayntii, waxay hubiyaan waxay u baahan yihiin qalabka wax lagu karsado. Sidoo kale, macmiilku wuxuu iiga mahadceliyey samirka iyo u fiirsiga mashruuciisa. Sida heshiiska heshiiska ee heshiiska, waxaan sh ...
Biljam 2000L iyo 4000L warshad khamri
Belgium 2000L iyo 4000L mashruuca khamriga Hadda waxaan u soo saareynaa macmiilkayaga 2000L iyo 4000L mashruuca khamriga, macmiilkan waxaan kula kulannay bandhigga Nuremberg ee 2018. Waxaana ka wada hadalnay faahfaahinta kulul si loo sameeyo qorshaha khamriga. Hoos waxaa ku yaal soosaarka khamriga hadda: ...
Belgium 1000L halsano
Warshadan khamriga ayaa laga aasaasay Belgium, oo la dhisay 2012. Sidoo kale milkiilaha Franky wuxuu rabaa in uu balaariyo warshada warshad samaynta 2017. Baabuhu waa 700L, sidoo kale PVRV iyo PRV waa astaanta KIESELMANN sida baahida macmiilka. ...